Sidee loo abuuraa fudud oo shaqeynaya Hot Spot (Hotspot) Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Macno malahan «Sistema Operativo» laga yaabaa in lagu rakibo qaar ka mid ah Kombiyuutar (desktop, mobile ama laptop)Iyadoo isku xira fiilo iyo fiilo la'aan, hubaal mar uun isticmaalaha / milkiiluhu wuxuu rabay inuu abuuro / habeeyo a «Punto de acceso caliente», taasi waa, a «Hotspot» isaga ku saabsan. Oo markaa ka faa'iideyso wadaagistaada Khadka internetka ku dhexjiray adiga interface network wireless qalab kale.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, midkoodna «Windows, MacOS o Linux» waxaad sameyn kartaa a «Hotspot» via Isgaarsiinta Khadka Taliska (CLI), taasi waa, terminal ama konsole. Si kastaba ha noqotee, gudaha «Windows y MacOS» Waxaa jira codsiyo badan oo dhinac saddexaad ah oo kuu oggolaanaya inaad abuurto a «Hotspot» hab fudud oo shaqeynaya via Isdhexgalka Sawirka (GUI). Daaran «Linux» iyagu ma badan, laakiin waxaad si fudud u abuuri kartaa mid isticmaalaya «Gestor de conexiones de red» ee ay ka mid yihiin «Entorno de Escritorio».
Marka hore, aan maskaxda ku hayno in a «Punto de acceso caliente o Hotspot» asal ahaan a helitaanka caymiska lagu soo bandhigo aalad si ay u jirto a isgaarsiinta wireless, fiilooyin la'aan, taasi waa, via Xiriirka WiFi, in badanaa la bixiyo Xiriirka khadka internetka, ama ilo kale iyo adeegyo adoo marinaya shabakad maxalli ah (LAN) o shabakad qaran ama caalami ah (MAN / WAN).
Marka labaadna, in habraacu waxyar uun ku kala duwanaan karo iyadoo ku xidhan hadba waxa loo kala hadlayo «Entorno de Escritorio» (Gnone, Plasma, KDE, XFCE, Qorfe, Mate, iyo kuwo kale) loo isticmaalay iyada «Distro GNU/Linux».
Arrinta maqaalkeenna, waxaan u adeegsan doonnaa a «Laptop» leh Intel i3 4 Core processor iyo 6 GB oo RAM ah iyo kan «Distribución MilagrOS GNU/Linux 1.2» la socota «Entorno de Escritorio XFCE» iyo «Gestor de conexiones de red» isku mid ah, loo yaqaan «Miniaplicación Gestor de la red», taas oo runtii maamusha Maareeyaha Shabakadda sidoo kale loo adeegsaday Gnome.
Fur «Gestor de conexiones de red» of isaga «Distribución GNU/Linux»:
Codsiga «Gestor de conexiones de red» mid cusub ku darista «conexiones de red» ilaa «Distribución GNU/Linux» isticmaalay:
U sheeg «Gestor de conexiones de red» in cusub «conexiones de red» wuxuu noqon doonaa nooca «Inalámbrica»:
Tafatir xuduudaha cusub «conexiones de red»:
Taabashada la yiraahdo «Inalámbrica» ee daaqaddan cusub loo yaqaan «Editando Conexión inalámbrica 1» Meelaha soo socda waa in lagu buuxiyaa talooyinka la soo jeediyey:
Magaca Xiriirka: Barta Hotspot (Ama kan aad dooratay)
SSID: Barta Hotspot (Ama kan aad dooratay)
Qaabka: Barta Barta (Hotspot or Access Point)
channel: Hore loo sii cayimay
Qalab: Wlan0 (Ama midka la heli karo)
Taabashada la yiraahdo «Seguridad inalámbrica» Meelaha soo socda waa in lagu buuxiyaa talooyinka la soo jeediyey:
Amniga: WPA iyo WPA2 Shakhsiyeed
Contraseña: Hotspot * 2019 (Ama midka aad dooratay)
Iyo tabta loo yaqaan «Ajustes de IPV4» Meelaha soo socda waa in lagu buuxiyaa talooyinka la soo jeediyey:
Habka: La wadaagay kooxo kale
Waxa kaliya ee haray waa inaad riixdo badhanka la yiraahdo «Guardar» si loo dhammeeyo qaabeynta oo loo sii wado tijaabinta «Punto de Acceso» o «Hotspot». Xusuusnow in halka kombiyuutarka meesha aan ku abuuro ka «Hotspot» leeyihiin awood isku mid ah, ma muujin doonto isku xirnaanta ka imaaneysa «Wi-Fi» la ogaado oo la heli karo. Markaad ka jarto, waxaad arki doontaa «Redes inalámbricas», sida hoos ka muuqata:
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, maskaxda ku hay in inkasta oo aad horeyba ugu xirnaan karto «Hotspot»tani damaanad kama qaadayso inaad internet ka, maadaama tan ay ku xirnaan karto arrimo kale oo nooca ah «Enrutamiento», waxyaabaha kale awgood, inuu kumbuyuutarku toos ugu xidhan yahay iyo in kale «Módem», a «Módem/Router», «Router» o «Red local empresarial», iyo sida qaababkan isku xirku u maareeyaan dhammaan isku xirnaanta (taraafikada) shabakadda.
Sidaad aragtay, abuur mid fudud oo shaqeynaya «Hotspot» iyadoo la adeegsanayo dhalasho «Gestor de conexiones de red» of isaga «Distribución GNU/Linux» Maaha wax u baahan aqoon farsamo oo aad u tiro badan ama sare. Laakiin haddii aad rabto inaad ku tijaabiso codsi muuqaal ah oo muuqaal ah, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ogaato «Wicd» y «WiFi Hostapd AP». Tan dambe, waxay leedahay keyd rasmi ah oo ku saabsan LaunchPad. Hadana haddii aad rabto inaad isku daydo qaab kale waxaan kuu daayeynaa xiriirkan rasmiga ah ee ku saabsan mawduuca bogga DEBIAN GNU / Linux.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee loo abuuraa fudud oo shaqeynaya Hot Spot (Hotspot) Linux?
Maqaal aad u wanaagsan .. iyo .. ABAWIFICANTV ?? Venezuela ayaa la ogaaday! XD
Way fiicnaan lahayd in la faahfaahiyo taas (in kasta oo aad sheegto, waxaan sheeganayaa si faahfaahsan) xaqiiqda ah in tani ay ka dhigeyso anteenadaada Wi-Fi inay u dhaqanto sidii barnaamij Wi-Fi ah oo loogu talagalay mashiinnada kale .. laga yaabee sawir yar ..
Jawaab PICCORO Lenz McKAY
Soo galitaan wanaagsan. Way fiicnaan laheyd in la sharaxo isla talaabooyinka ka imanaya konsole amarka, taas oo aakhirka waxbadan laga barto, ugu yaraan aragtidayda.
Ku jawaab davidochobits
Aad u faa'iido badan. Waxaan raadinayey dariiq aan ku xadeeyo ballaadhinta moobilka Skype ee mobilka. Sidan oo kale, waxaan xaddidaa xawaaraha ballaadhku marayo barta laga soo galo kombiyuutarka.
Ku soo jawaab Aprilio
Salaan kadib, Aprilio! Waan ku faraxsanahay inay waxtar kuu ahayd.
Aad baad ugu mahadsantahay inaad i xasuusiso talaabooyinka la raaco si loo abuuro qodob ka mid ah, waa inaan marwalba ilaabo hehe
Ku jawaab hector zamudio
Toddobaadka ciyaaraha: maxaa ku cusub Linux
PayPal, Visa, MasterCard ayaa dib u eegi kara lacagta macmalka ah ee Facebook, Libra